Times Of Nepali » बझाङ केन्द्र विन्दु भएर ठूलो भुकम्प गयो!! हेर्नुहोस
३१ जेष्ठ २०७६ |
बझाङ केन्द्र विन्दु भएर ठूलो भुकम्प गयो!! हेर्नुहोस
बझाङ केन्द्र विन्दु भएर भुकम्प गयो।
काठमाडौं बझाङ केन्द्र विन्दु भएर भुकम्प गएको छ। शुक्रबार दिउँसो १२ बजेर २२ मिनेटमा बझाङको छबिसपाथीभेरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको भुकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ । छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत भुकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ ।
काठमाडौं । बझाङ केन्द्र विन्दु भएर भुकम्प गएको छ। शुक्रबार दिउँसो १२ बजेर २२ मिनेटमा बझाङको छबिसपाथीभेरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको भुकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ । छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत भुकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ ।
काठमाडौं । बझाङ केन्द्र विन्दु भएर भुकम्प गएको छ। शुक्रबार दिउँसो १२ बजेर २२ मिनेटमा बझाङको छबिसपाथीभेरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको भुकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत भुकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ।
नेपालमै भुकम्पको उच्च जोखिममा रहेको बझाङमा गत बर्ष पनि २७ पटक भुकम्पको केन्द्र बिन्दु बनाएको र परकम्पन महसुस भएको थियो।
प्रकाशित मिति ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७:५२